Kukhona uhla enkulu izindawo kumele avakashele ubani ofuna ukuyihlola ngokugcwele Kazan. Indawo yokudlela "Pashmir" kwenziwa kuwo. Lesi sikhungo ababenakho esilindele izivakashi eziningi abakhuluma kuphela ezihamba phambili mayelana uhambo lwakho ngaphakathi kwezindonga zawo. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe mayelana nokubuyekezwa, kungatholakala esihlokweni ngezansi amanani kanye namasevisi.
Indawo kanye imodi wokusebenza
Namuhla, izivakashi kufanele umsebenzi ngezinye izikhathi akwenzeki - ukukhetha indawo lapho ungachitha isikhathi njalo. Ziningi izikhungo bekhungathekile ubani unqume ukuchitha isikhathi ngaphandle ekhaya. Kwabonakala ngabaningi yokudlela "Pashmir", eyayijabulisa kwakha isimo esihle okusezingeni eliphezulu izinsizakalo eziyikhwalithi. It evakashela abantu izithakazelo ezahlukene, umsebenzi nokuthile okufunwa kithi, ngoba zonke Baboneni yokudlela "Pashmir" indawo ekahle ukuzijabulisa. Ungayithola kuleli kheli elilandelayo: Kazan, emgwaqweni Taktash Hadi, 30. It ikhona echibini engxenyeni mlando edolobheni. Lokhu kuvumela izivakashi izindawo ukujabulela ukubukwa emangalisa we Old Tatar Settlement. Phakathi zonyaka ezifudumele, le balcony kule ndawo, ungacabanga ubuhle ezikhangayo ezinkulu kuleli dolobha. Amathuba anjalo okwenza banganikeza yokudlela kuphela "Pashmir". Imininingwane isikhungo aziwa izakhamuzi eziningi edolobheni. Ukuze uthole ukuthi silula. Kuwufanele ukugibela esitimeleni, thatha "Indwangu Sloboda" esiteshini, thatha ukushaywa esifushane futhi ukuza ukuphumula emnyango kule ndawo, okuyinto ngenhlanhla avulekele nganoma isiphi isikhathi sosuku kanye nganoma iyiphi usuku lwesonto.
idolobha ngalinye inama uhlu efanele iholide izindawo. Kuyinto iyathinteka neKazan. Indawo yokudlela "Pashmir" ngokuqiniseka isesikhundleni njengoba omunye izikhungo engcono kuqinisekisa lokhu ezingeni lelisetulu ukusebenza. Le ndawo kufanele chasiselwe esigabeni elite, nakuba ujabulele imizuzu khulula, abantu isimo ezahlukene. Ngokokuqala ngqá yokudlela yasungulwa ngo-December 2007. Ngaphandle, kuyinto isakhiwo ezimbili storey, okuyinto okunzima ukuba miss. Abathandwayo nemiklamo yokwakha ihlukanisa le ndawo kusukela nenqwaba yabanye. Isikhala esikhulu ikuvumela ukuba kanyekanye uphumule izivakashi ezingaphezu kuka-300, ngamunye kuwo ngeke bancishwa ukunakwa nokunakekela. Ehlobo, izivakashi yokudlela "Pashmir" Ungase futhi balale ngaphandle ababekuvulande esiklanyelwe kwezihlalo ayisishiyagalombili. Esikhathini isikhungo ngokuphumelelayo wenziwa nokuklanywa, okuvumela bonke abantu ukuba zibone indawo yazo isakhiwo esikhulu. I amahholo nethuba ulungise ukukhanya umsindo. Izivakashi bayamenywa ukuthi uphumule nangomsindo ezinhle umculo zonke izinhlobo intuthu hookah. inkonzo Fast and friendly, indlela siqu njalo isivakashi emkhathini ephelele noma yimuphi umcimbi, kusukela ngosuku romantic ziphethe dinner ibhizinisi - konke lokhu ngeke uwine ngisho nenhliziyo isivakashi ngabo kakhulu futhi ahlinzeke, imizwelo eyakhayo elikhanyayo.
Kazan, yokudlela "Pashmir" - ungumuntu omkhulu hhayi kuphela njengengxenye yamasevisi, kodwa futhi ngokuya ukubukeka. Yonke isakhiwo senziwa isitayela Futuristic, okuyinto ukuboniswa indlela engcono kakhulu le mikhuba namaphakathi nezwe. A uhlaka ekhoneni zikanokusho ethokomele ezifana yakhelwe nge restaurateur abadumile eMoscow. Ngenxa yalokho yomsebenzi wabo uye waphenduka isikhungo engavamile kakhulu lapho ngifuna ukuchitha isikhathi esiningi ngangokunokwenzeka. ukhaphethi zikanokusho, pillows, SOFAS ukhululekile, imibala ayegcwele kule umhlobiso, iziko ngesimo le Uzbek ikhabe - konke ukubukeka ngokuvumelana nomkhathi ebusa ngaphakathi kwezindonga sikhungo. It nakanjani kufanele uvakashele wonke umuntu oye wanquma ukufunda konke kumayelana nendawo efana Kazan. Indawo yokudlela "Pashmir" lalilokhu isitayela kanye motifs Oriental, induduzo ukusebenza, imfudumalo nenduduzo.
"Pashmir" (Kazan) - yokudlela, imenyu elakhiwa ezimfundisweni Culinary European futhi Uzbek. Noma ubani sawela embundwini yayo, ithuba ukujabulela ubuhle Amazing Culinary ezihlelwa izandla segolide labapheki. Kwimenyu enkulu kumba eqolo, okuvumela izivakashi ukukhetha okuthile ngokuvumelana ukunambitheka namaphunga izintandokazi zabo. izitsha ezikhethekile futhi babe ezakha amamenyu ngabanye, ezifana mafutha. Ama-oda wayevame ukubhekana noodle nge yenkomo nemifino, amadombolo, shourpa, amadombolo nge izimfanzi, i-baklava, Rolls ne amabhilikosi omisiwe. izitsha ezikhethekile yokudlela "Pashmir" - iwundlu kwi ezilulazayo namathe. ithikithi esijwayelekile - ruble 3000.
isipiliyoni Rich, ukumomotheka futhi amazwi okubonga - yilokho ephawula yokudlela "Pashmir" (Kazan). Izibuyekezo mayelana nale ndawo bathi yokudlela owaziyo ngempela ukuthi kusetshenziswe kanjani ngokunembile izifiso izivakashi zabo. Abaningi baye bame kwelokuthi lokhu kuyinto yokudlela kakhulu asemkhathini emzini. izikhungo zayo, isevisi kanye nomkhathi ziyojabula ngisho isivakashi eyinkimbinkimbi kakhulu. Indawo yokudlela "Pashmir" uyazi ukuthi ukunikela izivakashi zayo kuphela nalokho abangakuthola angali.
Ukuziphatha abafundi ezithombeni. 10 imithetho yokuziphatha umfundi
Emincane nge sauna: izithombe, izibuyekezo, osayizi. Semnyango nge sauna ngezandla